Komishanka Doorashooyinka Oo shahaado ku maamuusay shirkadii soo daabacday waraaqihii codbixinta | Somaliland.Org
Komishanka Doorashooyinka Oo shahaado ku maamuusay shirkadii soo daabacday waraaqihii codbixinta
January 8, 2013	Hargeysa (Somaliland.Org)- Komishanka doorashooyinka Somaliland ayaa shahaado sharaf gudoon siiyay shirkadii soo daabacday waraaqihii codbixinta doorashooyinka ee wadanka ka qabsoontay 28-kii bishii November ee kal-hore.
Komiishanku waxay sheegeen inay doorashada ku qabteen xaalad adag oo ay ku xeernaayeen duruufo badan oo dhanka sharciga ah iyo waliba arimo la xidhiidha nidaamka doorashada qabsoomideeda loo qorsheeyay.
Qoraal Guddoomiyaha Komiishanku ka akhriyey Munaasibad Komiishanku u qabtay shirkadii la siiyay qandaraaska Waraaqaha doorashada lagu galay ee SMITH, ayaa waxay ku sheegeen in doorashadaasi ahayd mid isxambaar ah, waxaanu qoraalkaasi u dhignaa sidan:- “Doorashadii maantu waxay ahayd isxambaar, musharixiintu xambaarayeen xisbiyada/ururadu si loo helo saddex xisbi qaran, Intaa oo dhan oo qof iyo qabiilba u guclaynaya, dhammaana diyaar u ahaa sax iyo qaladba inay helaan cod ay ku soo baxaan.”
Komiishanku waxa kale oo uu soo qaaday “Komiishanka doorashooyinka qaranku waxay ugu badheedheen inay ku qabtaan doorashada baaxadaasu leh iyadoo ay jiraan duruufo hoos ku qoran oo ku gedanaa doorashada” ayuu yidhi waxaanu intaa ku daraya isaga oo tirinaya duruudaha uu sheegay inay ku xeernaayeen “Dabaro sharci oo iska leh baxaya Diiwaangalintii oo la laalay, Habkii liistada furan oo la qaatay oo ah tajriibo inagu cusub, galdalooladeedana leh. Iyada oo aanay jirin degmo doorashooyin sii kala xaddida Magaalooyinka Waaweyn, Iyadoo aanu jirin sharci xakameeya dadka ku noqnoqda doorashada ama codeynta. Intaasi oo jirta Komiishanka doorashooyinka qaranka ILAAHAY wuu ku guuleeyay qabsoomidii doorashadii 2012-ka.
Komiishanku waxay sheegeen in aanay u dulqaadanayn inuu eedeeyo qof qaatay natiijada lagu muransan yahay “Komiishanku waxaanu marnaba qaadanaynin inuu eedeeyo ninkii natiijada qaatay, taasoo ay maanta ku fadhiyaan dalka oo dhan xildhibaanadii cusubaa”
Previous PostBadhasaabka Saaxil Oo Soo Bandhigay Qorshihiisa Sanadka 2013-kaNext PostMaamulka Degmada Gar-adag oo Gacanta ku dhigay Dad Gumaaday Dhirta Qoyan	Blog